से:क्स भनेपछि म भुतुक्कै हुन्छु ! – Nepali in Australia
रोचक खबर विचार
December 26, 2020 December 26, 2020 autherLeaveaComment on से:क्स भनेपछि म भुतुक्कै हुन्छु !
हँसिली र स्टाइलिस कपडामा सजिएकी सन्ध्याले आफ्नो उमेर ४० वर्ष पुगेको बताउँदा पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।‘तपाईं मुस्किलले ३० वर्षकी देखिनु हुन्छ । यसको रहस्य के हो ?’ सन्ध्याको उत्तर थियो, ‘प्रेमी छैन, श्रीमान् छैन, परिवार छैन र तनाव पनि छैन ।’ सन्ध्या बंसल एक नामी कम्पनीमा मार्केटिङ अफिसरका रुपमा काम गर्छिन् । उनी दिल्ली एनसीआरमा फ्ल्याट लिएर एक्लै बस्छिन् । उनी एक्लै बस्नुको कारण हो, उनमा यौ न चाहना छैन । केटा वा केटी कसैप्रति पनि उनी आकर्षित हुन सक्दिनन्। अर्थात् उनी ‘एसे’क्सुअ’ल’ हुन् ।
‘२३–२४ वर्षको उमेरदेखि नै म अरुभन्दा फरक हुँ भन्ने लाग्न थालेका थियो,’ सन्ध्या भन्छिन्, ‘मेरै उमेरका महिलाहरु पे्रमी खोज्न थालेका थिए । मलाई भने त्यसमा कुनै चासो थिएन ।’ उनलाई पुरुष मन पर्दैन भन्ने पनि होइन । उनी भन्छिन्, ‘त्यसबेला मलाई एक पुरुष ज्यादै मनपथ्र्यो । मलाई उनीसँग समय बिताउन रमाइलो लाग्थ्यो । समय सँगै बिताउँदै जाँदा उसको मनोबल उच्च हुँदै थियो, जुन सामान्य थियो । तर जब कुरो यौ’नसम्म पुग्यो, मलाई निकै असहज लाग्यो । मलाई यस्तो लाग्यो मेरो शरीरले यौ नलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । मलाई यौ नको जरुरी नै थिएन ।’
‘सुरुमा मलाई कुनै ग म्भीर समस्या छ कि भन्ने लागेको थियो । सम्बन्ध टुटेकोमा मैले आफूलाई नै दोषी ठानें । जब मैले आफ्नो यौ निकताबारे बुझ्न थालें, त्यसपछि आफैलाई स्वीकार गर्न थालेँ,’ सन्ध्या भन्छिन्, ‘विस्तारै मैले यो रोग नभएर आफू असामान्य भएको थाहा पाए । सामाजिक सन्जालमार्फत मैले मेरैजस्तो अनुभूति भएका मानिसहरु भेट्न पाएँ । यसरी म आफूलाई चिन्न सफल भएँ ।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
‘कयौं पटकको अनुभवबाट आफूबारे थाहा पाइसकेपछि मैले बुझिसकेकी थिएँ, कुनै पुरुषसँग म नजिक हुने हो भने उसले यौ नको कुरा गर्न थाल्नेछ । जसका लागि म तयार थिइनँ । यसबारे कुनै सम्झौता गर्न पनि म तयार थिइनँ । कुनै ए’से’क्सुअ’ल पुरुषसँग मात्र मेरो सम्बन्ध टिक्नसक्थ्यो । त्यसैले मैले पुरुषसँग सम्बन्ध स्थापनाको प्रयास नै छाडिदिएँ,’ उनी भन्छिन् ।‘कैयौं मानिस ए’से’क्सुअल हुन्छन् तर उनीहरुलाई यसबारे सही जानकारी नहुँदा दुःख पाइरहेका हुन्छन् । सामाजिक र पारिवारिक दबाबका कारण आफ्नो यौ’निकतालाई गोप्य राख्न उनीहरु बाध्य छन्,’ उनी भन्छिन् ।
जवाफमा उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म म एक्लै छु । मलाई लाग्छ, पछिसम्म एक्लै नै हुनेछु । मेरा साथी, म बस्ने भवनका मानिसहरु नै मेरा परिवार हुन् । हामी अलग अलग कोठामा बस्छौँ तर हाम्रो भान्सा एक छ । हामी भेट्छौं, दुःखसुखका कुरा गर्छौँ । हामी परिवार हौं । परिवार मेरो पहिचान भन्दामाथि हाबी नहोस भन्ने मेरो धारणा छ ।’ यद्यपि मन मिल्ने मान्छे भेटिए त्यस्तो व्यक्तिसँग उनी जीवन बिताउन तयार छिन् । तर, यो सम्बन्धको आफ्नै दायरा हुनेछ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
‘त्यस्तो साथीसँग म एकै घरमा बस्न चाहन्छु । तर, हामीबीच दूरी पनि हुनुपर्छ । हामी एकै घरमा बसेपनि कोठा अलग हुनुपर्छ । हामी सँगै खाना खानेछौँ । भावनात्मक रुपमा साथमै हुन्छौं,’ उनी ती दायराबारे चर्चा गर्छिन् ।आमा बन्ने र बच्चा पाउने सन्दर्भमा सन्ध्या प्रष्ट छिन् । ‘मलाई अरुकै बच्चा मनपर्छ । आफू जन्माउन चाहन्नँ । मलाई लाग्छ बच्चाको चाहना राख्दा महिला कमजोर बन्छिन,’ उनी भन्छिन् ।
परिवार र छिमेकीले विवाह गर्न दबाब दिएपनि उनले सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी छिन् । ‘मेरो कान्छी बहिनीको विवाह भइसकेकोले ममाथि विवाहको दबाब झन् बढेको छ,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘म कसैको कुरा सुन्दिनँ । म यसबेला एक्लै छु । एक्लै खाना खान्छु, किनमेल गर्न जान्छु । बिरामी हुँदा आफैँ अस्पताल जान्छु । विवाह जरुरी छजस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो हिसाबमा जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वतन्त्र र शान्त जीवन बाँच्नु हो ।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,